Igumbi esihlabathini eRimini - Amafulethi Iyaqashisa e-Rimini, Emilia-Romagna, i-Italy
Igumbi esihlabathini eRimini
·Rimini, Emilia-Romagna, i-Italy
Ifulethi lonke ibungazwe ngu-Hotel Orizzonti
Umbungazi akawavumeli amaphathi noma ukubhema. Thola imininingwane
Indlu enamakamelo amabili e-Residence, osebeni lolwandle nr.30 eRimini namamitha angama-20 ukusuka esitobhini sebhasi esiya enkabeni yeRimini, esiteshini sesitimela kanye nesikhumulo sezindiza. Imizuzu emi-5 nje ukusuka eRimini Fair.
Indlu enamakamelo amabili enikezwe ukunambitha nokunaka imininingwane,
yenzelwe imindeni ethanda ukujabulela iholide lazo ngokunethezeka nenkululeko noma imibhangqwana yabangane abadinga amakamelo ahlukene a-2.
yenzelwe imindeni ethanda ukujabulela iholide layo ngokunethezeka nenkululeko noma imibhangqwana yabangane abadinga amakamelo ahlukene a-2.
Kuhlanganiswe: igumbi lokuhlala elinombhede wesofa ophindwe kabili nekhishi elihlotshiswe nge-hob, ifriji nezitsha zekhishini, igumbi lokulala eliphindwe kabili nendlwana yokugezela nesishizi kanye nezinwele. Amakamelo wonke anomoya futhi afakwe i-TV ephephile ne-flat screen ye-digital.
yenzelwe imindeni ethanda ukujabulela iholide lazo ngokunethezeka nenkululeko noma imibhangqwana yabangan… funda kabanzi
5.0 (izibuyekezo ezingu-6)
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-6
I-Vis) iyisifunda esiphakathi neRimini ukuhambisa wena kulo lonke elaseRiviera, eduze kakhulu nendawo nendawo. I-promenade phambi kwefulethi iba ngezinyawo ngesikhathi kusihlwa kusuka ngo-20: 30 kuze kube ngu-24.00 wokuhamba ngezinyawo noma ukuyothenga.
Ibungazwe ngu-Hotel Orizzonti
Siphatha ihotela kude nemizuzu engu-15 futhi siyohlala sitholakala kunoma yisiphi isidingo sabavakashi.